भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको छोराले नेपालमा को–को भेटे, के-के भने ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिको छोराले नेपालमा को–को भेटे, के-के भने ?
नेकपाका युवा संगठनका संयोजक दीपशिखा भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिका छोरालाई मायाको चिनो दिदैं ।
३० असार २०७६ ८ मिनेट पाठ
काठमाडौं– भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निलोकस मडुरोका छोरा तथा युनाइटेड सोसोलिस्ट पार्टीका युवा संगठनका नेता निकोलस अर्नेस्टो मड्युरो गुयरा यतिबेला नेपाल भ्रमणमा छन्। नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को युवा संगठनको निमन्त्रणमा १५ सदस्यीय टोलीसँगै उनी उनी शनिबार साँझ नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। नेपालमा भ्रमणका तीन जना सहायक शिक्षामन्त्री पनि आएका छन्। नेपाल भ्रमण रहेका भेनेजुएलाको टोली सबै ३५ वर्षभन्दा मुनिका छन्।
नेपाल भ्रमण रहेका उक्त टोलीले नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेकपाकै नेता वामदेव गौतम र नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेका थिए। दाहालसँग सोमबार बिहान खुमलटारमा, खनालसँग शनिबार होटल याक एण्ड यति, गौतमसँग भैसेपाटीमा र श्रेष्ठसँग सोनपास्थित समिट होटलमा भेट गरेका थिए। भेटमा समसामयिक राजनीति छलफल भएको सहभागी नेकपाका एक नेताले बताए। उनीहरु चन्द्रागिरी पनि घुम्न गएका थिए। उनीहरुलाई नेकपाको युवा संगठनले चन्द्रागिरी घुमाउन लगेका थिए।
गुयराले भने– ‘हामी नेपालबाट केहि सिक्न आएका हौं’
आइतबार बिहान होटल याक एण्ड यतिमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका नेता झलनाथ खनालको प्रमुख आतिथ्यमा यराको टोलीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिएको थियो। ‘जनसंख्या पनि नेपाल र भेनेजुएला करिब करिब उत्ति नै रहेछ’ उक्त कार्यक्रममा गुयराको भनाई उदृत गर्दै सहभागी एक नेताले नागरिकसँग नाम नखुलाउने सर्तमा भने ‘भूगोल र हावापानी पनि मिल्दोजुल्दो, सुन्दर नेपाल रहेछ। हामी नेपालबाट केहि सिक्न र बुझ्न आएका हौं। यहाँ पनि कम्युनिष्ट सरकार रहेछ खुशी लाग्यो।’
हामी भेनेजुएलाको पक्षमा छौं–झलनाथ खनाल
सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि झलनाथ खनालले नेपालले अहिले विकास गति लिइरहेको बताएका थिए। ‘भेनेजुएला पनि अहिले राजनीतिकसंकट खेपिरहेको छ’ सहभागी एक नेताले खनालको भनाई उदृत गर्दै भने ‘संवादको माध्यमबाट समस्या हल होस्, अरुले हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन्। भेनेजुएलाको समस्या हल गर्न त्यहाँकै जनताको अधिकार हो। शान्ति वार्ताको माध्यमबाट चाँडै राजनीतिक समस्या हल भएर शान्ति कायम होस्।’ भेनेजुएलाको बैधानिक सरकारलाई नेकपाको साथ र समर्थन छ। आफ्नो देशको बारेमा अरु देशले हस्तक्षेप गर्न नहुने नेता खनालले बताएका थिए। त्यस्तै नेकपाका नेता खनालले नेपालमा भेनेजुएलाको दुतावास खोल्न पनि माग गरेका थिए।
दाहालले भने– ‘हाम्रो समर्थन भेनेजुएलालाई नै हो’
त्यसोत केहि महिनामा भेनेजुएलाको राष्ट्रपति निलोकस मडुरोका पक्षमा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि हस्तक्षेप गर्दा दाहालले बिरोध गरेका थिए। तर उनकै छोरा तथा त्यहाँका सांसद नेपाल आउँदा दाहालले खासै भेट्न चाहेनन्। नेकपाकै नेताहरुको दवावमा बल्ल दाहालले गुयरालाई भेट दिएका थिए। नेकपाका ति नेताले दाहालसँग भनेका थिए ‘भेनेजुएलादेखि आएका छन्, घरमै आउन लागेका पाहुनालाई भेट दिनुपर्छ’ भनेपछि दाहाल बल्ल भेट्न तयार भएका थिए। दाहालसँग भेनेजुएलाको टोलीको भेटमा राजनीतिक ऐक्यबद्धता चाहिएको कुरा उल्लेख गरेको सहभागी एक नेताले नागरिकलाई बताए। ‘अमेरिकाले हाम्रो देशमाथि नचाहिँदो हस्तक्षेप गरिरहेको छ, नेपालको पनि समर्थन हामीलाई चाहियो।’ उनीहरुले यस्तो बताएपछि दाहालले नेकपा भेनेजुएलाकै पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘हामी तपाइँहरुको पक्षमा छौं’ दाहालको भनाई उदृत सहभागी नेकपाका एक नेताले भने। उक्त भेटमा दाहालले पहिला पनि आफुले भेनेजुएलाकै पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेको बताएका थिए।
को–को थिए भ्रमण टोलीमा ?
इन्टरनेशनल वामपन्थी युवा शक्तिको उक्त टोलीमा रडवेक्जा पोलियो (सचिव, जेपीएसयुभी एण्ड संस्कृतीका उपमन्त्री),
निकोलस अर्नेस्टो मड्युरो गुयरा, (सचिव, राजनितीज्ञ वकिल, जेपीएसयुभी एण्ड संसद सदस्य), जर्ज परेज (राष्ट्रिय आयोजक, जेपीएसयुभी एण्ड उपमन्त्री शिक्षा तथा सूचना मन्त्रालय), रेन्डर पेना (सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, जेपीएसयुभी, निर्देशक अन्तर्राष्ट्रिय आयोजक तथा जनता शक्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध मन्त्रालय), नोश्लीयु रोड्रिग (सचिव शसत्तिकरण समाज, जेपीएसयुभी, तथा संसद सदस्य), एना फेन्टस (उपाध्यक्ष पुर्वीय क्षेत्र, राष्ट्रिय आधिकारीक व्यक्ति, जेपीएसयुभी), ग्रिस कोल्मेनर्स (पार्टी प्रवक्ता ताचिरा राज्य), यसनिदी ग्वारियरी, जेपीएसयुभी सचिव, विकास उत्पादन तथा विशेषज्ञ, उपमन्त्री विश्वद्यिालय शिक्षा), कारोमोटो गोडो (एम्बेशेडर भेनेजुएलादेखि भारत र नेपाल) रहेका थिए।
नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा नेकपाका युवा संगठनका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाका अनुसार भेनेजुएलाका उक्त टोलीले आफुहरुकै निमन्त्रणामा नेपाल आएको नागरिक न्यूजलाई बताए। गुयरालाई सुरक्षा थ्रेट भएको कारण सार्वजनिक नभएको सापकोटाले बताए। ति टोलीले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा पुगेर नेपालको संसदीय अभ्यासबारे पनि सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए। नेपालमा उनीहरुले नेकपाकै नेताहरुसँग भेट गरेको बताए। नागरिक न्यूजलाई प्राप्त सूचना अनुसार भेनेजुएलाका उक्त टोली भियतनाम भ्रमण सकाएर नेपाल आएका थिए। अब उक्त टोली मंगलबार नेपालबाटै चीन जाँदैछन्।
प्रकाशित: ३० असार २०७६ १९:५५ सोमबार
भेनेजुएला अर्नेस्टो_मड्युरो_गुयरा नेपाल_भ्रमण नेकपा_युवा_संगठन